ငါဝယ် Peptide Alarelin မတိုင်မီအဘယ်အရာကိုသိထားသင့်သလဲ
1 ။ Alarelin ကဘာလဲ?
3 ။ Alarelin ၏လျှောက်လွှာ
4 ။ ကိုးကားစရာအဘို့အ Alarelin အသုံးပြုမှု
5 ။ အကျိုးကျေးဇူးများ Alarelin
6 ။ Alarelin ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
7 ။ Alarelin သိုလှောင်မှုအခြေအနေ
1. Alarelin ကဘာလဲ?
Gonadotrophin-releasing ဟော်မုန်း (Alarelin) သင့် pituitary ဂလင်းကနေ LH နဲ့ FSH ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ချိလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်သောဒြပ် LR-RH အ agonist အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးယင်း၏မျိုးဥထွက်၏ induction အဖြစ် endometriosis ၏ကုသမှုများအတွက်ရေပန်းစားသည်။ အဲဒါကိုပိုပြီးဒါ anti-အိုမင်းဖြည့်စွက်အဖြစ်အကြီးအကူညီနိုင်ပါတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ကတည်းကမူးယစ်ဆေးအရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Alarelin နှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အမြဲသေချာသင်တစ်ဦးထံမှ Alarelin Buy အောင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော Alarelin ထုတ်လုပ်သူ။ ရောင်းရန် Alarelin အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌တယောက်ကိုတယောက်ထုတ်လုပ်သူများထံမှကွဲပြားပေလိမ့်မည်။ များစွာရှိပါသည် ပေးသွင်း Alarelin စျေးကွက်အပေါ်ပေမယ့်အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်သင့်အခြိနျယူပါ။ အရည်အသွေးမူးယစ်ဆေးဝါးအများဆုံး Alarelin ရလဒ်များကိုအာမခံပါသည်။
သဘာဝ Alarelin (79561-22-1) ပုံစံများတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြပြီးအမျိုးသမီးအတွက်မျိုးဥထွက်သွေးဆောင်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒြပ်ဗားရှင်း Alarelin သဘာဝ LH-RH အစသည်တို့သို့မဟုတ်သွေးဆောင်မျိုးဥထွက်အတွက် gonadotropin လျှို့ဝှက်ချက်မှာတွေ့ရှိနိုင်သည့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားပိုကြီးတဲ့ဆေးညွှန်းထဲမှာသတ်မှတ် LH-RH အရန် အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အလုပ် Alarelin ပိုပြီး FSH-LH ထုတ်လုပ်ရန်သင့် pituitary gland ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပြုလုပ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကသို့ရရှိသွားတဲ့တခါ, အ Alarelin, ပို Luteinizing ဟော်မုန်း (LH) နှင့် follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ရန်သင့် pituitary ဂလင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သော။ နှစ်ခုဟော်မုန်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မြေတပြင်လုံးတန်ဖိုးရှိရှိသံသရာအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ FSH ကြီးထွားမှု, မျိုးဆက်ပွားဖြစ်စဉ်များနှင့် pubertal ရငျ့ထိန်းချုပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမျိုးသမီးအတွက် LH ဟော်မုန်း Corpus luteum ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဖြစ်မျိုးဥထွက်ဖြစ်စဉ်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထီးအဘို့, Alarelin အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အောင်မြင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံလောက်သော LH နဲ့ FSH ထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဦးအနေအထားအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။ Peptide Alarelin နှစ်ခုအရေးပါသောအဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်၌ကြီးသောအကူအညီနဲ့၏ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သေချာသင်အဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနေရရှောင်ရှားရန်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့အညွှန်းအောက်ရှိမူးယစ်ဆေးယူပါစေ။ သင်သည်လက်ျာသောက်သုံးသော ယူ. သင်၏ဆရာဝန်၏ Alarelin အသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်ကပ်သောအခါ Alarelin ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်ပါတယ်ကိစ္စတွင်ကိုလည်းသင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပို Alarelin ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
Alarelin အများအားဖြင့်မျိုးဆက်ပွားလေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများပိုမိုဒါတိရစ္ဆာန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးရဲ့သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိမူးယစ်ဆေး၎င်းတို့၏မျိုးပွားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်, လူ့အလောင်းတွေ, အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုကူညီဖို့အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်အကြားဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားကိုလည်း testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။ Alarelin application ကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအမှုန့်နှင့်ဆေးထိုးပုံစံများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးဆေးစစ်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် Alarelin လျှောက်လွှာ၌သင်တို့ကိုလမ်းပြဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကုန်ကြမ်း Alarelin အမှုန့် မူးယစ်ဆေးလည်း Endometriosis သို့မဟုတ် Hysteromyoma ကုသရန်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါထိုး, သင်ပုံမှန် Alarelin သောက်သုံးသောအချိန်စာရင်းနှင့်သင့်ဆေးမှူးကနေဆေးထိုးရရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းအိမ်မှာကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးသွင်းပေမယ့်သင်သောက်သုံးသောစီမံခန့်ခွဲခင်သင့်ဆရာဝန်ကိုသင်လေ့သေချာအောင်နိုင်ပါတယ်။ unguided သတိရပါ Alarelin အသုံးပြုမှု ထို့အပြင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သင်ယုံကြည်စိတ်ချလို့မရပါဘူးတဲ့ကုမ္ပဏီကနေရတဲ့နေကြသည်လျှင်တန်ပြန်ကျော်ရောင်းချရန် Alarelin purchasing လည်းပိုပြီးဒါအန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Alarelin ထုတ်လုပ်သူမူးယစ်ဆေးရဲ့အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်အတူသင်တို့သည်သင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကိုလည်း Alarelin သို့မဟုတ်သင်အလွယ်တကူကြှနျုပျတို့၏ website ကနေရနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး peptide purchasing ၌သင်တို့ကိုကူညီသင့်ပါတယ်။
4.ကိုးကားစရာအဘို့အ Alarelin အသုံးပြုမှု
အဆိုပါ diluent ၏ဖလားကိုနှင့် peptide ဖလားကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ topper တစ်ခုအရက်ပိတ်ကျဲစကိုယူ
အခုတော့တစ်ဦး 1cc ပြွတ်ရှိသည်နှင့်သင်နှစ်သက်တဲ့ diluent ယူပါ။ သင့်ဆရာဝန်များကအကြံပေးတဲ့အတိုင်းညာဘက်တိုင်းတာခြင်းရွေးချယ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်ထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသွားမထင်သော်လည်း, ကဆန္ဒရှိမှီဖို့ဆိုးကျိုးများဖက်ကသို့မဟုတ်ကျရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ဖြစ်စေ Alarelin ရလဒ်များကိုအဆိုပါ melanotan ၏ 1mg ဖလားကိုနှုန်း ml သို့မဟုတ် (cc) .10 သင့်ရဲ့ Alarelin သောက်သုံးသော Melanotan ၏ 100mg ညီမျှသော U1 slin ပြွတ်အပေါ်တစ်ဆယ်အမှတ်အသားများန်းကျင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ melanotan ၏ 2mg နှုန်း9ml ကို 10cc) ကို U100 ပြွတ်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဆယ်အမှတ်အသားများ 1mg melanotan ဆင်တူသည်ကိုဆိုလိုသည်။
အားလုံးအထက်ပါခြေလှမ်းများပြီးနောက်ယခု diluent ပါရှိသည်ကြောင်းကိုသင်၏အပ်ယူနှင့်သင့်ဖလားကို lyophilized အမှုန့်ထဲသို့တွန်းနှင့် diluent သင့်ရဲ့ peptide ပျော်ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါ diluent ပုလင်းထဲသို့ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးပြီးတာနဲ့ယခုညင်ညင်သာသာဖြေရှင်းချက်လောကဓာတ်ဒါပေမယ့်အပေါငျးတို့သ lyophilized မှုန်ပျော်သည်အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင့်လှုပ်ခါခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ရှင်းလင်းသောနှင့်အတူမတည်မနေပါဘူး
ဖြေရှင်းချက်။ အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ Alarelin အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်
သငျသညျအမြင့်ဆုံး Alarelin ရလဒ်များကိုခံစားရန်အဘို့အကာအတွေ့အကြုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူထံမှ Alarelin Buy ။ အကောင်းဆုံး ရောင်းရန် Alarelin အောက်ပါလာဘ်ပူဇော်သင့်သည်,
အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်, ထိုသို့အမျိုးသမီးအတွက် Endometriosis ဆကျဆံတယျ။ ရုံသေချာသင်ပိုကောင်းရလဒ်များကိုများအတွက်ရောစပ်နှင့် Alarelin dosagein structions အတိုင်းလိုက်နာစေပါ။
သင့်ရဲ့ pituitary gland ကပို LH နဲ့ FSH ထုတ်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်, ငါတို့သည်လည်းအမြန်ပေးပို့ပါစေ။
ရုံကအခြား peptides ကဲ့သို့ Alarelin အိုမင်းလက္ခဏာတွေလျှော့ချအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
overdosed သည့်အခါအပြင်လူသိများ Alarelin အကျိုးကျေးဇူးများကိုကနေ, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးလည်းပိုပြီးဒါမှောင်မိုက်ဘက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လူ့အလောင်းတွေအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်။ အခြားသူတွေကိုတောင်လက်ျာ Alarelin လျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအပြီးကြောက်မက်ဘွယ်သောအတှေ့အကွုံရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်အချို့လူများကနည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရ။ အလားတူ Peptide Alarelin အသုံးပြုသူများသက်ဆိုင်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာရှာဖွေနေ, သင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏အများစုဆေးနှင့်အတူပျော်ရွှင်သော်လည်း, အသုံးပြုသူတစ်ဦးအပိုင်းတွင်တူညီဖြည့်စွက်နဲ့မကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံဖူးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်အဆိုပါအသေးစား Alarelin ခြမ်း၏အချို့;
မူးယစ်ဆေး overdosing ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုးလာရေ retention ကို
ကိုယ်အလေးချိန် / အမြတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်ဆေးညွှန်းကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ,, သူတို့သည်လည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုပေါ်မူတည်သောအခြားပြင်းထန်သော Alarelin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဆေး overdose သူကိုအသုံးပြုသူများသည်အများအားဖြင့်ကြိုတင် Alarelin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပေမယ့်အမြဲတမ်းအမှုမဟုတ်ဘူး။ အမှု၌သင်တို့ကိုမည်သည့်ထူးခြားသောခံစားမှုသို့မဟုတ်အခြေအနေကိုပိုဆိုးရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ဆိုင်းဘုတ်များသတိထားမိ။ အဆိုပါပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာပါဝင်သည်;
ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးအတွေ့အကြုံများကွဲပြားပေမယ့်သင့်ရဲ့ Alarelin သောက်သုံးသောယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများအဘို့အသွားသေချာအောင်ပါပြီကတည်းကအဆိုပါသက်ရောက်မှုများဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုကန့်သတ်မထားပါ။
7. Alarelin သိုလှောင်မှုအခြေအနေ
အဆိုပါ Alarelin ပေးသွင်းသူထံမှဆေးရတဲ့ပြီးနောက်သိုလှောင်မှုကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လုံးကိုသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ Alarelin ထုတ်လုပ်သူ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကိုဘယ်လိုပေါ်တွင်သင်သတိပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျ့လျြောသောသိုလှောင်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကို Alarelin သငျသညျအမြင့်ဆုံးအာမခံပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီမူးယစ်ဆေးအခန်းအပူချိန်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိသော်လည်းသင့်အကြောင်းသုံးပတ်ကြာပြုလုပ်သုံးစွဲဖို့ရှိပါတယ်လျှင်, သင်တို့ပတ်လည် -18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်အတူတစ်ဦးဧရိယာ၌ Alarelin သိုလှောင်သင့်ပါတယ်။ အသုံးပြုမှု၏ 2-7 နေ့ရက်ကာလအဘို့,4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုအကောင်းဆုံးသိုလှောင်မှုခွအေနအေရလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့အချိန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ထိုကဲ့သို့သော 0.1% BSA အဖြစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပရိုတိန်း add OR ရှိပါတယ်အကြံပြုပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးသိုလှောင်စဉ်အေးခဲ-နွေးထွေးသံသရာကာကွယ်တားဆီးဖို့သတိရပါ။
ဝေ, အက်စ်, Gong, Z. သည် Dong, ဂျေ, Xie, K. , ဝေ, အမ်, Zhang က, ဂျေ, & ဝမ်, ဂျေ (2012) ။ သိုး၏သားဥအိမ်များတွင် pituitary နှင့် GnRHR ဖြန့်ဖြူးအတွက် GnRHR, FSHR နှင့် LHR ၏စကားရပ်အပေါ် alarelin တက်ကြွကိုယ်ခံစွမ်းအား၏ဆိုးကျိုးများ။ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ Jiangsu ဂျာနယ်, 28(1), 114-120 ။
Zhang က, အက်စ်, ဟန်, ဂျေ, Leng, G. အ, Di, X တို့မှာ, Sha, C တို့, Zhang က, X တို့မှာ ... & လျူ, ဒဗလျူ (2014) ။ pharmacokinetic နှင့် pharmacodynamic လေ့လာမှုများအဘို့ကြွက်ပလာစမာထဲမှာ goserelin နှင့် testosterone ဟော်မုန်းများ၏တပြိုင်နက်တည်းပြဌာန်းခွင့်များအတွက် LC-က MS / MS နည်းလမ်း။ Chromatography B က၏ဂျာနယ်, 965, 183-189 ။
Ararooti, ​​တီ, Niasari-Naslaji, အေ, Asadi-Moghaddam, ခ, Razavi, K. , & Panahi, အက်ဖ် (2018) ။ FSH, ECG-FSH နဲ့ hMG နှင့် dromedary ကုလားအုပ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချင်းများနှင့်အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အတူ Hatch blastocyst သန္ဓေသား၏အပြောင်းအရွှေ့ကိုအောက်ပါကိုယ်ဝန်နှုန်းထားများအောက်ပါ Superovulatory တုံ့ပြန်မှု။ Theriogenology, 106, 149-156 ။
Nootropic Sunifiram (DM6) Powder ၏ 235 အလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများ